सशांक र तपाई,को पोल खोल्दिउँ,भन्दै देउवा जंगिए पछि नि,लो,का,लो ,भएर चुप लागे रामचन्द्र पौडेल:: Mero Desh
सशांक र तपाई,को पोल खोल्दिउँ,भन्दै देउवा जंगिए पछि नि,लो,का,लो ,भएर चुप लागे रामचन्द्र पौडेल
Published on: ७ आश्विन २०७८, बिहीबार १०:४०
परमादेश बाट बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहे को नेपाली काग्रेस भित्र मन्त्री भागबण्डाको रडाको म,,च्चिएको छ ।;प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल समुह चिडिएको छ हिजो बसेको काग्रेस पदाधीकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विच नोकझोकनै चलेको थियो ।
देउवाले पार्टीमा सल्लाह नगरि धमाधम मन्त्री नियुक्ती गरेको यो के पारा हो ? भन्दै रामचन्द्र पौडलले उग्र रुप देखाए पछि देउवा पनि जंगिएका थिए । पौडलले अतीनै गरे पछि देउवाले जंगिदै पौडललाई तपाइ र सशांकको पोल खोल्दीउँ भन्दै हकारेका थिए ।
देउवाले पौडेललाई मलाई सार्वजनिक रुपमा बोल्न बाध्य नपार्नुस तपाइ र सशांक विच भएको कुरा म यहाँ खोल्दीउँ ? तपाईहरुले दिनु भएको नाम मैले गो,,जीमा राखेकै छु गरि हाल्छुनी भनेका थिए । देउवा सँग बाहिर आक्रोस देखाए पनि भित्रभित्र छुट्टै डिल गर्ने गरेको कुरा बाहिर आए पछि पौडेल र कोइरालाको निद हराम भएको छ
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा जानुपूर्व रामचन्द्र पौडेल समूहका प्रमुख नेताहरु महाराजगञ्जमा भेला भए ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा जम्मा भएका नेताहरुले पार्टीमा छलफल नगरी डा। नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेकोमा असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, कांग्रे सको भागमा कांग्रेसले पाउने मन्त्रीको संख्या कति हो रु त्यसमध्ये आफूहरुले कति पाउने हो रु यकिन गर्नुपर्ने बताए ।
संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा त्यसअनुसार नै प्रस्तुत हुन शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरे ।एक सहभागीका अनुसार पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी सहितका नेताहरु सहभागी बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय भागवण्डाबारे प्रश्न उठाएका थिए ।”
तर सभापति देउवाले त्यसलाई सहजै डिल गरेका छन् । देउवा ले मन्त्रालय भागवण्डा अझै नटुंगिएको बताए । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नगरे संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अआफैं जानुपर्ने अवस्था आएकाले खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गर्नु परेको उनले बताए । देउवाले भने, ‘संख्या टुंगो लागेपछि तपाईंहरुसँग छलफल नगरी कहाँ गर्छु र १’
उनले पटकपटक ‘रामचन्द्रजीले पनि मलाई भन्नुभएकै छ । शशांकजीले पनि भन्नुभएकै छ । म त्यो भन्दा बाहिर कहाँ जानु र !’ भनेको एक सहभागीले सुनाए ।
“अर्थात उनी मन्त्रालयको भागवण्डामा समूहगत डिल गर्ने पक्षमा छैनन् । किनकी त्यसो गर्दा पौडेल समूहले ४० प्रतिशत खोज्नेछ भने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि भाग छुट्याउनुपर्छ । जुन कांग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रालय संख्यामा सम्भव देखिे का छैनन् । किनकी आफ्नो समूहबाट गृहमन्त्री बा,लकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमन्त्री खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ नियुक्त गरिसकेका छन् ।”
प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाउने तयारी छ । त्यसैले उनी समूहगत डिल नगरी वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा। कोइराला र पूर्वमहा मन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा एकएक जनालाई मन्त्री बनाउन पक्षमा रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
यसले मन्त्रालयको भाग पुर्‍याउन उनलाई केही सहज त हुन्छ नै, पौडेल समूहमा समेत फाटो आउन सक्छ । किनकी बुधबार मात्र पनि पौडेल समूहमा नेताहरुले व्यक्तिगत डिल गर्न शीर्ष नेताहरुलाई खबरदारी गरेका थिए । अर्जुन नरसिंह केसी, बल बहादुर केसी, सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरुले एक्ला एक्लै डिल गरे स्वीकार नगर्ने चे’ता’व’नी दिएका थिए ।